Matambudziko maviri matsva akagadzirira vashandisi veApple Watch: Zuva rePasi uye Zuva Renyika Dzese | IPhone nhau
Matambudziko maviri matsva akagadzirira vashandisi veApple Watch: Zuva rePasi uye Zuva reDensi reMunyika
Apple yakagadzirira zviitiko zviviri zvitsva zvevashandisi veApple Watch uye mune iyi kesi ndiyo inozivikanwa kare kune vese se iro reZuva rePasi uye rimwe rinouya zvechokwadi kuzogara munguva uye iri reInternational Dance Day.
Isu tinoziva yekutanga kwematambudziko ayo Apple akatogadzirira isu gore rega, asi iyo nyowani ndeyeyeInternational Dance Day. Iri dambudziko nyowani rinosvika musi waApril 29 richange riine kuita kwedzidzo yekutamba ingangoita maminetsi makumi maviri kana kudarika kubva pakushandisa kwekudzidzira kwewachi yedu. Ehe, kutamba imwe zvakare kunopisa macalorors mukuwedzera pakunakidzwa.
Aya ndiwo mararamire eApple anosara emwedzi uno waApril
Pamwe kune vamwe vashandisi iyi ndeye bullshit asi kune vamwe vazhinji vashandisi Aya matambudziko anogona kuve akakosha kwavari kuti vatange kuita chiitiko chemuviri mune zvine mwero asi pamwe zvinogara zvichitaurwa, saka vanogamuchirwa. Mukuwedzera, pane chimwe chinhu chatinofanira kujekesa kubva pakutanga, hapana munhu anotimanikidza kusangana nematambudziko aya ekurovedza muviri.
Asi kune avo vedu vari kutarisira kune aya uye mamwe matambudziko isu tichaenda kunoona misi uye pamusoro pese kudzidziswa kwatinofanira kuita kutora dambudziko, menduru uye zvimiti zvekugovana neyemeseji app:
Inotevera Kubvumbi 22 kunouya kunetsekana kweZuva repasi: Ngatibudei uye tinopemberera Zuva rePasi nekuita chero rudzi rwekurovedza muviri kwemaminitsi makumi matatu kana kudarika. Tinogona kushandisa yepamutemo Apple yekudzidzira kunyorera kana chero chishandiso chinowedzera kudzidziswa kune yedu wachi.
Musi waApril 29, iro dambudziko reInternational Dance Day richasvika: Ngatitambe! Kuti tikunde mubairo uyu tinofanirwa kuita kutamba kwekutamba kwemaminetsi makumi maviri kana kudarika. Mune ino kesi, iyo yekudzidzira app ndiyo yega sarudzo iyo yandinofunga inorekodha kudzidziswa uku saka uchafanira kuishandisa.
Matambudziko akati wandei anonakidza atinonyanya kukunda vashandisi vanoaita sezvo iri nyaya yekufamba zvishoma mushure mezvose. Tine chokwadi chekuti imi mose varipo muri kuzobudirira kumatambudziko aya izvo zvinosvika mumazuva mashoma anotevera kuApple Watch, saka enda navo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Matambudziko maviri matsva akagadzirira vashandisi veApple Watch: Zuva rePasi uye Zuva reDensi reMunyika
Kufunga Kwenhema: Raven's Banquet bhonasi episode, mwaka wechipiri usati wasvika